नेपालमा एकैदिन ४ सय १४ जनाले जिते कोरोना, सक्रिय संक्रमित कति ? Canada Nepal
नेपालमा एकैदिन ४ सय १४ जनाले जिते कोरोना, सक्रिय संक्रमित कति ?
काठमाडौं - नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ४ सय १४ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ सय १४ जनाले कोरोनालाई जितेको जानकारी दिएको हो ।
यससँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या दुई लाख ५६ हजार ७ सय ७२ पुगेको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर ४४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। ४,१५४ वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा ४४५ जनामा कोरोना संक्रमण भएको हो ।
यससँगै कोरोना संक्रमितको कूल संख्या दुई लाख ६६ हजार १ सय ४३ पुगेको छ । हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ४ हजार ४ सय ३४ जना रहेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा ५ जना कोरोनाभाइरस संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ सय ३७ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पौष २९, २०७७ बुधवार १८:०२:०५ बजे : प्रकाशित